လူငယ်များနှင့်လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအကြားအထွေထွေ Erectile လုပ်ဆောင်မှုကွန်ဒုံးနှင့်ဆက်စပ်သောစိုက်ထူခြင်းပြReportနာများကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းမရှိသော (CAEP) (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On On
Stephanie အေ Sanders ပါရဂူဘွဲ့1,2,3, Brandon ဂျေဟေးလ်ပါရဂူဘွဲ့1,4, အဲရ Janssen ပါရဂူဘွဲ့1,5စင်သီယာအေဂရေဟမ်ပါရဂူဘွဲ့1,2,6, *, ရစ်ချတ်အေ Crosby သည်ပါရဂူဘွဲ့1,2,7, ရော်ဘင် R. Milhausen ပါရဂူဘွဲ့1,2,8 နဲ့ William အယ်လ် Yarber HSD1,2,3,9
အပိုဒ်ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းထုတ်ဝေ: 17 Aug 2015
ဤစာအုပျအစီရင်ခံသုတေသနဆုကိုနံပါတ် R21 HD ကို 060447, အီး Janssen နှင့်လုပ် SA Sanders (PIs) အရကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ၏ကလေးကျန်းမာရေးနှင့်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု၏ဥနိကနေဒီ Shriver အမျိုးသားသိပ္ပံ (NICHD) ကထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုသာစာရေးသူ၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်နှင့်သေချာပေါက်ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ၏တရားဝင်အမြင်များကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ။
ကွန်ဒုံး-ဆက်စပ်စိုက်ထူပြဿနာများ (CAEP) ကိုက်ညီမှုသို့မဟုတ်မပြည့်စုံအထီးကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောတစ်ဦးလျှော့တွက်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ CAEP ၏အခြေခံယန္တရားနားလည်သဘောပေါက်, ဤအခက်အခဲများသတင်းပို့သူကိုယောက်ျားလည်းကွန်ဒုံးကိုလေ့လာရသေးအသုံးမကြသောအခါအခြေအနေများတွင် erectile ပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ဖွယ်ရှိမရှိကြသည်မဟုတ်။
လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကွန်ဒုံးနှင့် (ii အသုံးမပြုတဲ့အခါမှာစိုက်ထူပြဿနာများရှိသည် CAEP သတင်းပို့သူကိုယောက်ျား (ဈ) ကိုပိုမိုများပါတယ်ဖြစ်စေ, ကွန်ဒုံး-သုံးပြီးငယ်ရွယ်, လိင်ကွဲယောက်ျား (အသက် 18-24 နှစ်) ၏နမူနာအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ် ) erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်စံတွေ့ဆုံရန်။
ပြီးခဲ့သည့် 479 ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းကွန်ဒုံးသုံးပြီးသုံးပြီးနှင့်မရသောအခါနိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း Erectile ၏အမည် (IIEF-5) ပြီးစီးခဲ့နှင့်စိုက်ထူပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းများကိုဖြေကြားအွန်လိုင်းစုဆောင်း 90 ယောက်ျားတစ်ဦးစုစုပေါင်းခံစားခဲ့ရသညျ။ လူဦးရေအချိုးအစား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, နှင့်ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကို variable တွေကိုဆက်စပ်အဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
ကွန်ဒုံးလျှောက်လွှာကာလအတွင်းသို့မဟုတ် penile-အင်္ဂါဇာတ်အတိတ် 90 ရက်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံမှု (PVI) နှင့် IIEF-5 ရမှတ်စဉ်အတွင်းစိုက်ထူဆုံးရှုံးမှု self-အစီရင်ခံအကြိမ်ရေ။
လူတို့သညျ၏, 38.4% ကွန်ဒုံးလျှောက်လွှာများနှင့် PVI နှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်း CAEP ရှိခြင်းအဖြစ် PVI စဉ်အတွင်း CAEP ရှိခြင်းနှင့် 13.8% အဖြစ် 15.7% ကွန်ဒုံးလျှောက်လွှာစဉ်အတွင်း CAEP ရှိခြင်းအဖြစ် 32.2%, ထိုမျှမ CAEP အုပ်စုခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ CAEP မဆိုပုံစံသတင်းပို့ယောက်ျားကွန်ဒုံးအသုံးမပြုတဲ့အခါမှာယောက်ျားလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းစိုက်ထူအခက်အခဲများအစီရင်ခံရန်အဘယ်သူမျှမ CAEP သတင်းပို့ထက်သိသိသာသာပိုများပါတယ်ခဲ့ကြသည်။ သာသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးလျှောက်လွှာစဉ်အတွင်း PVI စဉ်အတွင်း CAEP အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် PVI CAEP မပါဘဲယောက်ျားထက် IIEF-5 အပေါ်သိသိသာသာနိမ့်သွင်းယူသူကိုယောက်ျား။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက် CAEP သတင်းပို့သူကိုယောက်ျားကိုလည်းပိုပြီး generalized စိုက်ထူအခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Clinician ယောက်ျားကွန်ဒုံးအတွေ့အကြုံကို CAEP သုံးပြီးရှိမရှိအကဲဖြတ်ဘယ်မှာသင့်လျော်သော, psychosexual ကုထုံးအဘို့ကိုရည်ညွှန်းသို့မဟုတ်ကွန်ဒုံးကျွမ်းကျင်မှုပညာရေးပေးသင့်ပါတယ်။
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ၏ခန့်မှန်းပျံ့နှံ့အသုံးပြုသောအဓိပ္ပါယ်နှင့်စံနှုန်းများအပေါ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်မူတည်ပြီးလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားခြားနားသည် [1-3]။ erectile ပြဿနာများအတွက်အများဆုံးတသမတ်တည်းခန့်မှန်းတစ်ခုမှာအသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့အဟောင်းတွေလူတို့တွင်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားပေမယ့် , erectile ပြဿနာများအဖြစ်ကောင်းစွာလုလင်တို့သည်အားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြနေကြပါတယ်။ တဦးတည်း epidemiological လေ့လာမှုအသက်အရွယ် 2-40 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်ယောက်ျား၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50% မကြာခဏစိုက်ထူပြဿနာများ (EPS) ၏ညည်းညူခန့်မှန်း ။ ငါးဥရောပနိုင်ငံများတလွှားတစ်ဦးထက်ပိုသောမကြာသေးမီစစ်တမ်းအသက်5နှင့် 18 နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြားယောက်ျား၏ 29% အတိတ်6လအတွင်း ED ကြုံတွေ့ဖူးကြောင်းအစီရင်ခံ ။ ရံဖန်ရံခါ erectile အခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားသူကိုလူပျို၏အချိုးအစား, သို့သော်, 16 နှစ်အောက်အမေရိကန်ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက် 40% ကနေအထိအများကြီးပိုမြင့်  30-18 နှစ်ပေါင်းအသက်ယောက်ျားတစ်ဦးဆွစ်နမူနာများတွင်% 25 မှ .
ရံဖန်ရံခါ erectile ပြဿနာများပိုမိုဘုံအတွေ့အကြုံကိုအခွအေနေအချက်များအရေးပါသော etiologic အခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ အထီးကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းစိုက်ထူအခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားဖို့လူတခြို့ predisposes တဲ့အခြေအနေကိုဥပမာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဘရာဇီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများက (အသက်ဆိုလို: 21.2 နှစ်) ၏လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ 13.3% Erectile ရာထူးအမည်များ၏ရိုးရှင်းသောနိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း (IIEF-5) ကိုသုံးပြီး, ED ရှိခြင်းအဖြစ်ရောဂါခဲ့ကြသည် ။ ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုတဲ့သူကဒီလေ့လာမှုမှာလူပျိုတို့ erectile ပြဿနာများအစီရင်ခံရန်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ ငယ်ရွယ်အထီးလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်တဲ့နမူနာခုနှစ်တွင် (ကာလသား) ဆေးခန်းတက်ရောက် , ထိုယောက်ျား၏ 37.1% အနည်းဆုံးအခါသမယတွင်ကွန်ဒုံး-ဆက်စပ်စိုက်ထူပြဿနာများ (CAEP) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ လိင်တူဆက်ဆံသူနဲ့လိင်ကွဲယောက်ျားနှစ်ဦးစလုံးပါဝငျသောအများအပြားလေ့လာမှုများ, ယခု CAEP ဘုံဖြစ်မည်အကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြ ။ CAEP အခြေခံသည့်ယန္တရားများနေဆဲကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်, လိင်စိတ်နိုးထပုံစံများမကြာသေးခင်က psychophysiologic လေ့လာမှုအတွက် CAEP နှင့်အတူယောက်ျား CAEP မပါဘဲယောက်ျားထက်နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာဖို့ပိုအချိန်နှင့် / သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပြင်းထန်သောဆွလိုအပ် ။ ဒါဟာ erectile တုံ့ပြန်မှုသာအဲဒီနောက်မျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့၏ပထမတစ်မိနစ်အတွက် CAEP အုပ်စုတွင်အနိမ့်ခဲ့ကြကြောင်း, သို့သော်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
CAEP သတင်းပို့သူကိုယောက်ျားကွန်ဒုံး slippage အပါအဝင်အခြားကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအမှားအယွင်းများနှင့်ပြဿနာများကိုတစ်ဦးအကွာအဝေးသတင်းပို့ဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းအတွက်ကွန်ဒုံး-ဆက်စပ် erectile အခက်အခဲများ, မစုံလင်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောတစ်ဦးလျှော့တွက်အချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် , မပြည့်စုံကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု (နှောင်းပိုင်းတွင်လျှောက်လွှာများနှင့်အစောပိုင်းဖယ်ရှားရေး) [9,13]နှင့်ကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကို [14,15]။ 1,875 ယောက်ျားပတျသကျတဦးတည်းမကြာသေးမီအလားအလာလေ့လာမှုမှာ, (မာကျောမှု၏ ratings, penile အရှည်နှင့်လုံးပတ်အဖြစ်အခက်အခဲထိန်းသိမ်းခြင်းစိုက်ထူအပါအဝင်) စိုက်ထူ "အရည်အသွေး" ၏သဘောထားအမြင်မပြည့်စုံကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် ။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အမျိုးစုံမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ရှိပါကကွန်ဒုံး fit သို့မဟုတ်ခံစားရတယ်, ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုလမ်းနှင့်အတူပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားလျှင်လူတို့, သူတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်ကွန်ဒုံးသုံးစွဲဖို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကင်းမဲ့လျှင် CAEP တွေ့ကြုံခံစားဖို့ပိုဖွယ်ရှိစေခြင်းငှါ .
, သေးအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရသေးကြောင်းတစ်ခုမှာဆိုတဲ့မေးခွန်းကို CAEP သတင်းပို့သူကိုယောက်ျားကွန်ဒုံးအသုံးမပြုတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင် erectile အခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားဖို့ပိုများပါတယ်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ penile-အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု [PVI] စဉ်အတွင်း CAEP သတင်းပို့သောသူတို့အား (တစ်ခုခုကွန်ဒုံးလျှောက်လွှာကာလအတွင်းရှိမရှိ, (18-24 အသက်) ကွန်ဒုံး-သုံးပြီးငယ်ရွယ်, လိင်ကွဲယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ပဲ, ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများအတွက်) ဖို့ပိုများပါတယ်: ကွန်ဒုံးမသုံးကြသောအခါ (ဈ) EPS ရှိသည် ဖြစ်. , နှင့် (ii) ကို IIEF အပေါ်ကွဲပြားခြားနားဂိုးသွင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က erectile အခက်အခဲများ၏ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းရန်ပေမယ့်နုပျို, ကွန်ဒုံး-သုံးပြီးယောက်ျားတစ်ဦး nonclinical နမူနာအတွက် CAEP ၏ဆက်စပ်မှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့မဟုတ်ခဲ့ပေ။
သင်တန်းသားများကိုနုပျိုခဲ့ကြသည်, လိင်ကွဲယောက်ျားတက္ကသိုလ် listservs (ဥပမာ, တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအုပ်စုများနှင့်ဦးစီးဌာနစာရင်းများ) နှင့် Facebook ပေါ်မှာဖြန့်ချိအီလက်ထရောနစ် Flyer မှတဆင့်စုဆောင်း။ ခွင့်ပြုချက် listserv မန်နေဂျာထံမှရရှိသောခဲ့ပါတယ်နှင့် Facebook ကြော်ငြာလမ်းညွှန်ချက်များနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ "? ကွန်ဒုံးသင့်ရဲ့စိုက်ထူနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ပါနဲ့": ကျနော်တို့မေးမလျှောက်သောလျာထားသော Flyer များက CAEP နှင့်အတူယောက်ျား oversampled နှင့် "ကွန်ဒုံးကသင့် arousal နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်သလား" အရည်အချင်းများသတ်မှတ်ချက် Self-ဖော်ထုတ်ဟောင်းနွမ်း 18 နှင့် 24 နှစ်အကြားဖြစ်ခြင်း, အင်တာနက် access ကိုရှိခြင်းစနစ်ကိုထည့်သွင်း လိင်ကွဲသကဲ့သို့, အတိတ် 90 ရက်အတွင်း PVI များအတွက်ကွန်ဒုံးများနှင့်အင်္ဂလိပ်စာကိုဖတ်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုတော်မူပြီးမှ။ သူတို့တစ်တွေလိင်သီးသန့် (monogamous) 1 တစ်လကြားဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်ပိုရှည်ခဲ့လျှင်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုဆက်ဆံရေး၏ပထမတစ်လအတွင်းပယ်စက်စက်တွေ့ရှိထားပြီးအဖြစ်ထို့အပြင်ယောက်ျား, ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည် ။ CAEP သတင်းပို့ယောက်ျား oversampled ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့အလေးအနက်ထားမေးခွန်းလွှာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. နှင့်၎င်းတို့၏သတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုရပါမည်ဟုတ်မဟုတ်စစ်တမ်းရဲ့အဆုံးမှာဖြေဆိုသူတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးသောအခါ, သာ 1.2% သူတို့အလေးအနက်ထားစစ်တမ်းယူမတုန့်ပြန်နှင့်သူတို့ရဲ့ဒေတာဖယ်ထုတ်လိုက်။
နောက်ဆုံးနမူနာတွင်လူငယ် ၄၇၉ ယောက်ပါဝင်သည်။ ပါ ၀ င်သူအားလုံးထံမှစာဖြင့်အသိပေးအကြောင်းကြားစာကိုရရှိခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့သည်လေ့လာမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံးကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
ယောက်ျားများသည်ကွန်ဒုံးမသုံးသည့်အခါမေးခွန်းနှစ်ခုက EPs ကိုအကဲဖြတ်သည်။ သင်တန်းသားများကို“ လွန်ခဲ့သော 90 ရက်အတွင်းသင်လိင်တံ - အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ပြီးသင်ကွန်ဒုံးမသုံးဖူးသည့်အချိန်ကိုစဉ်းစားပါ။ ” ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်မေးခွန်းနှစ်ခုမေးပြီးနောက်“ လိင်တံမထိုးဖောက်မီ (လိင်တံကိုမလိင်အင်္ဂါထဲထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီ) မထိုးဖောက်ခင်သင်ဘယ်လောက်အကြိမ်ကြိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့တာလဲ၊ နှင့်“ သင်လိင်အင်္ဂါလိင်ဆက်ဆံစဉ် (သင်မလုပ်ဆောင်မီ) ၌သင်ဘယ်လောက်အကြိမ်ကြိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့သနည်းသို့မဟုတ်သင့်စိုက်ထူမှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်?” တုံ့ပြန်မှုနည်းလမ်းများမှာ -“ ဘယ်တော့မှ၊ ”“ ရံဖန်ရံခါ၊ ”“ တစ်ဝက်ထက်နည်းသောအချိန်၊ ”“ အများစုမှာ၊ ”“ အမြဲတမ်း” နှင့်“ ငါကွန်ဒုံးကိုသုံးသောကြောင့်ငါမဖြေနိုင်” ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား variable တွေကိုနှစ်ခုအသီးသီး, ထိုးဖောက်ခြင်းမပြုမီ EPs (EP-Before) နှင့် PVI (EP-PVI) စဉ်အတွင်း EPs အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။ variable တစ်ခုစီအတွက်၊ အမျိုးသားများသည်ရံဖန်ရံခါသို့မဟုတ် ပို၍ မကြာခဏဖြေဆိုပါက၊ ဟုတ်ကဲ့ဟုသတ်မှတ်ပြီး၊
အဆိုပါ IIEF-5 ED အကဲဖြတ်ရန်အကျဉ်းအဖြေရှာတဲ့ tool အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ 15-ကို item IIEF, တစ်ဦးကိုတိုဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက summative ရမှတ်ငါးပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်ထုတ်ပေးနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤအရမှတ်အပေါ်အခြေခံပြီး, ယောက်ျားထို့နောက် 22 (ED (25-17), အလယ်အလတ် ED (21-12), သို့မဟုတ်ပြင်းထန် ED အလယ်အလတ်ရန်မ ED (16-8) ရှိခြင်းအဖြစ်ခွဲခြား, ပျော့ ED (11-5), ပျော့ခဲ့သည် ယင်းရိုအားဖြင့်အကြံပြုစံများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအောက်ပါ -7), .
မူလတန်းပါဝင်သူ Variables ကိုအုပ်စုခွဲခြင်း
CAEP နှစျယောကျပုံစံများကိုတစ်ဦးချင်းစီတစ်ခုတည်းပစ္စည်းများအားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးစွာလူတို့သညျ "ဘယ်လိုမကြာခဏအတိတ် 90 နေ့ရက်ကာလ၌သင့်ကိုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုမပြုမီပေါ်တွင်ကွန်ဒုံးချပြီးနေချိန်မှာသင့်ရဲ့စိုက်ထူဆုံးရှုံးဖို့စတင်ပါခဲ့တာလဲ" ဟုမေးခဲ့သည်တုံ့ပြန်မှုအခြားနည်းလမ်းခဲ့ကြသည်: "ဘယ်တော့မှ", "ရံဖန်ရံခါ", "လျော့နည်းထက်ဝက်ကျော် အချိန်, "" ထိုအချိန်ကာလအများစု, "နှင့်" အစဉ်အမြဲ။ "ထို့နောက်ယောက်ျား" အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်းကွန်ဒုံးဝတ်ဆင်နေစဉ်မကြာခဏဘယ်လိုအတိတ် 90 နေ့ရက်ကာလ၌သင့်ကိုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်သင့်စိုက်ထူဆုံးရှုံးဖို့စတင်ပါခဲ့တာလဲ "ဟုမေးခဲ့သည်တုံ့ပြန်မှုအခြားနည်းလမ်းခဲ့ကြသည် ။ "ဘယ်တော့မှ", "ရံဖန်ရံခါ", "လျော့နည်းထက်ဝက်ကျော်အချိန်", "အချိန်အများဆုံး," နှင့် "အစဉ်အမြဲ" ဒီနှစ်ခုမှာ variable တွေကို CAEP-လျှောက်လွှာ (ကွန်ဒုံးလျှောက်လွှာစဉ်အတွင်း CAEP) နှင့် CAEP-PVI (အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည် CAEP အသီးသီး,) PVI များအတွက်ကွန်ဒုံးသုံးတဲ့အခါ။ သူတို့ဘယ်တော့မှပြန်လျှောက်လျှင်တစ်ဦးချင်းစီ variable ကိုအဘို့, ယောက်ျား "မဟုတ်ပါ" သူတို့ကရံဖန်ရံခါသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏပြန်လျှောက်လျှင် "Yes" ကိုအဖြစ်ခွဲခြားခြင်းနှင့်ခံခဲ့ရသည်။ CAEP-လျှောက်လွှာ CAEP-PVI သာ, သာ, No-CAEP နှင့် CAEP-နှစ်ဦးစလုံးလေးအုပ်စုများသည်ဤနှစ်ခု variable တွေကိုသုံးပြီးဖန်တီးထားကြသည်။
, လူမျိုး, ဇာတိမြို့၏လက်တင် / ဟစ်စပန်းနစ်လူမျိုးစု, ပညာရေး, ယာနျဘာသာတရားကို, ဝင်ငွေ, အရွယ်အစား, အရေဖျားလှီးအခြေအနေ, ကာလသား၏တစ်သက်တာသမိုင်းရှိမရှိ: အစောပိုင်းကဖော်ပြထားတဲ့ထိုက်ခွင့်နှင့်ဖယ်စံများအပြင်အောက်ပါနမူနာ descriptor ကို variable တွေကိုနှင့်ရလဒ်များ၏အလားအလာဆက်စပ်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် ပါဝင်သူအစဉ်အဆက်သတိလစ်တစ်စုံတစ်ဦးက impregnated ဖူး, သူသည်အစဉ်အမြဲတည်နေတဲ့အထီးကွန်ဒုံးသုံးစွဲဖို့ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့ရှိမရှိ။ လက်ရှိကျန်းမာရေးပြဿနာများ (ဆီးချို, ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ, စိတ်ကျရောဂါ / စိုးရိမ်ပူပန်မှု, မျိုးစုံနဗ်ကြော, ကွုံလှီ, သွေးတိုး, နှလုံးရောဂါအခြေအနေကတခြား) နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ / အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှုရောဂါ [ADHD Add /] ဆီးချို, နှလုံးအတှကျအဆေးဝါးများအသုံးပြုခြင်း ( , စိတ်ကျရောဂါအခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှု, ဟော်မုန်း,) ကိုလည်းပါဝင်သူယခင် 12 လအတွင်းတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကုသခဲ့ရှိမရှိအကဲဖြတ်အဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦး 90 ရက်ကြာပြန်လည်သိမ်းဆည်းကာလကိုသုံးပြီးအောက်ပါ variable တွေကိုတိုင်းတာခဲ့ကြသည်: အပါဝင်သူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုပြောင်းလဲကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအပြုအမူသို့မဟုတ်တဦးတည်းကိုပြောင်းလဲရန်အစီအစဉ်တွင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိ, အခြားတားဆေးနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်း, မိမိမိတ်ဖက် impregnate ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိ ( s ကို), နှင့်မည်သို့မကြာခဏသူကြီးနှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးမပြုသောအခါသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း phosphodiesterase type ကို5inhibitors (PDE-5i) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု CAEP အုပ်စုသည်ခွဲခြားမှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့များဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်နှစ်ထပ် chi-(သာအဘယ်သူမျှမ-CAEP, CAEP-လျှောက်လွှာ, CAEP-PVI သာနှင့် CAEP-နှစ်ဦးစလုံး) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်စိုက်ထူ ပတ်သက်. မေးခွန်းနှစ်ခုမှအဖြေကွန်ဒုံးအသုံးမပြုအခါ, IIEF-5 အမျိုးအစား (ပြင်းထန် ED ရန်မ ED), နှင့်အခြားအမျိုးအစား variable တွေကို။ အချို့သောဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့အသေးစားမှသုညလေ့လာတွေ့ရှိကြိမ်နှုန်း chi-နှစ်ထပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်ယူဆချက်ကိုချိုးဖောက်ကြောင်းပေးထားကျနော်တို့ (ဘယ်တော့မှအစီရင်ခံကာလအတွင်း EPS မဆိုအတွေ့အကြုံကို vs. )4×2ထွက်သယ်ဆောင်။ ဒီနောက်တွင် Post-hoc နှိုင်းယှဉ်2chi-နှစ်ထပ်စမ်းသပ်မှု×2သုံးပြီးကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
ကှဲလှဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း IIEF-5 နှင့်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးအခြားစဉ်ဆက်မပြတ်ရမှတ်များ Post-hoc နှိုင်းယှဉ်များအတွက်အသုံးပြုSchefféရဲ့စမ်းသပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ အရေးပါမှုမှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် P <0.05 ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို SPSS ဗားရှင်း ၂၁ (၀ င်းဒိုးအတွက် IBM SPSS စာရင်းအင်း၊ ၂၁.၀; IBM ကော်ပိုရေးရှင်း၊ အာမွန်၊ နယူးယော့၊ အမေရိကန်) ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယုတ်အသက်အရွယ် 20.43 နှစ်ပေါင်း (စံသွေဖည် = 1.63) ဖြစ်ခဲ့သည်။ အများစုအာဖရိကန်အမေရိကန် / အနက်ရောင်နှင့်အခြားလူမျိုးရေးအုပ်စုများအဖြစ်ကျန်ရှိသောအဖြစ်အာရှ, 80.1% အဖြစ် 6.8%, (4.7%) အဖြူရောင်အဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ဟစ်စပန်းနစ် / လက်တင်လူမျိုးတို့ 4.2% အားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါသည်။ အများစု (66.5%) 3.8% အဆင့်မြင့်ဘွဲ့, 29.4% အထက်တန်းကျောင်းများနှင့် 0.4% အထက်တန်းကျောင်းဖြည့်စွက်ဘူး, ကောလိပ် / နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျောင်းကအဖြစ်ပညာရေးဟာသူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုညွှန်ပြ။ ရုံကျော်တတစ်ဝက် (54.7%) ဟာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေအဆင့်ကိုအနိမ့်-လူလတ်တန်းစားသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းခဲ့ညွှန်ပြခြင်းနှင့် 53.0% မြို့ကြီးများတွင်မှအလတ်စားကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ အများစု (87.3%) ရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်တစ်ခုကာလသား (97.3%) နှင့်အတူရောဂါဖြစ်ကြောင်းတစ်ခါမျှနှင့်အထီးကွန်ဒုံး (63.0%) သုံးစွဲဖို့နည်းကိုသင်ကြားခဲ့သညျ။ မရည်ရွယ်တဲ့ impregnation 9.2% အားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ 479 ယောက်ျား၏, 184 (38.4%) CAEP-နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ် CAEP-လျှောက်လွှာသာ CAEP-PVI အဖြစ်, 66 (13.8%) သာနှင့် 75 (15.7%) အဖြစ်အဘယ်သူမျှမ-CAEP, 154 (32.2%) အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ အုပ်စုတစုကွဲပြားမှုအစဉ်အဆက်သတိလစ်တစ်စုံတစ်ဦးက impregnated ဖြစ်စေ, အသက်, လူမျိုး, လက်တင် / ဟစ်စပန်းနစ်လူမျိုးစု, ပညာရေး, ယာနျဘာသာတရားကို, ဝင်ငွေ, ဇာတိမြို့၏အရွယ်အစား, အရေဖျားလှီးအခြေအနေ, ကာလသား၏တစ်သက်တာသမိုင်းအဘို့အတွေ့အစဉ်အမြဲအထီးကွန်ဒုံးသုံးစွဲဖို့ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တာရှိမရှိခဲ့ကြသည်မရှိပါ။
လက်ရှိကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုများ၏အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းပေးဆို CAEP သတင်းပို့လူအပေါင်းတို့ကနေဒေတာတွေကိုပေါင်းစပ် (ဆို CAEP အုပ်စုကို) နှင့်မျှ CAEP သတင်းပို့ယောက်ျားကနေသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ ကွာခြားချက်ကိုတွေ့တစ်ခုတည်းသောအဖွဲ့ CAEP အုပ်စုတွင်ယောက်ျား၏ 12.9% ကိုအဘယ်သူမျှမ-CAEP အုပ်စုသည် (χအတွက်ယောက်ျားများ၏ 4.9% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤသတင်းပို့အတူစိတ်ကျရောဂါ / စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့2 = ၈.၁၄၊ လွတ်လပ်ခွင့်ဒီဂရီ [df] ၁၊ P = 0.004) ။ သို့သော်စိတ်ကျရောဂါ (၃.၂%) နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း (၂.၉%) အတွက်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတွင်အုပ်စုလိုက်ကွဲပြားမှုမရှိပါ။ ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတွင်အုပ်စုလိုက်ကွဲပြားမှုမှာ ADHD / ADD ဆေးများအတွက်ဖြစ်ပြီး၊ CAEP သည် ၃.၃% နှင့် ၈၉.၉% သော CAEP အုပ်စုများကဤဆေးဝါးများအသုံးပြုမှုကိုဖော်ပြသည်။2 = 5.62, df 1, P = 0.018) ။ ၁% အောက်သာလျှင်ဆီးချိုရောဂါ (၀.၈%)၊ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ (၀.၈%)၊ နဗ်ကြောဖွဲ့ရောဂါများစွာ (၀.၂%)၊ ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှု (၀.၂%)၊ နှလုံးအခြေအနေ (၀.၉%)၊ အလားတူအနိမ့်အချိုးနိမ့်အချိုးအစားကိုအသုံးပြုသည်ဆီးချိုရောဂါ (1%), နှလုံးဆေးဝါး (0.8%) နှင့်ဟော်မုန်းဆေးဝါးများ (0.8%) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပါဝင်သူအနည်းငယ်ကမြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန် (၂.၁%)၊ အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြ0.2နာများ (၁.၇%) နှင့်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်း (၁.၅%) တွင်လိင်ပြproblemsနာများအတွက်ကုသမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
အတိတ် 90 ကာလ၌အနည်းငယ်သင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု (1.7%) သို့မဟုတ်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ (1.3%) ပြောင်းပေးဖို့အစီအစဉ်များအတွက်ခဲ့ခြင်းနှင့်အနည်းငယ် (5%) သို့မဟုတ်ကွန်ဒုံးမပါဘဲ (1.9%) နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက် PDE-1.9i ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် ။ အဘယ်သူမျှမကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ဦးဖက်ရဖို့ကြိုးစားနေခဲ့သည်။ ပိုယောက်ျား၏ထက်ဝက်ထက်သူတို့မွေးဖွားထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အထီးကွန်ဒုံးအပေါ် (54.9%) အားကိုးနှင့် / သို့မဟုတ်သူတို့အတိတ် 59.1 နေ့ရက်ကာလ၌မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှု၏အခြားပုံစံများနှင့်အတူအထီးကွန်ဒုံး (90%) အချိန်အနည်းဆုံးအချို့ကိုအသုံးပြုကြောင်းကိုညွှန်ပြ။ အုပ်စုတစုကွဲပြားမှုကဤ variable တွေကိုမဆိုဘို့ရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။ သူတို့ကအတိတ်ကာလ 17.3 ရက်ပေါင်းအနည်းဆုံးအချို့အခါသမယအပေါ်ကွန်ဒုံးထက်အခြားမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုပုံစံပေါ်တွင်မှီခိုခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံသည့်အဘယ်သူမျှမ-CAEP အုပ်စုသည် (9.8%) အတွက်ထက်မဆို CAEP အုပ်စုသည် (90%) ထဲမှာသိသိသာသာပိုပြီးယောက်ျား (χ2 = 5.18, df 1, P = 0.023) ။
ကြိမ်ယောက်ျားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရေအတွက် 90 ရက်ကြာပြန်လည်သိမ်းဆည်းကာလအတွင်းကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြု 10.8 (စံသွေဖည် = 14.3) ကြီးနှင့်ဤလေးပါးအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာကွာခြားခြင်းမရှိပါ။ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုများ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု, သို့သော်အဘယ်သူမျှမ-CAEP အုပ်စုသည် (73.4%) (F (82.4) = 3,471 နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် CAEP-နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုသည် (3.44%) အတွက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ P = 0.017), အခြားအုပ်စုများအလယ်အလတ်နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောအတူ (CAEP- လျှောက်လွှာ 82.1% သာ; CAEP-PVI သာ 77.7%) ။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နမူနာ၏လေးပုံတစ်ပုံ (၂၃.၀%) က၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းကွန်ဒုံးသုံးသောကြောင့်ဤမေးခွန်းများကိုမဖြေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဇယား 1 ကျန်ရှိသောလူတို့သညျအဘို့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတွေ့ရမယ်။ ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုမရသောအခါအနည်းငယ်ယောက်ျား EPS ၏မကြာခဏအတွေ့အကြုံများညွှန်ပြသောကြောင့်, chi-နှစ်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ "Yes" ကိုခင်မှာ EP-နှင့် EP-PVI များအတွက် "မဟုတ်ပါ" vs. အဖြစ်ခွဲခြားသည့်ရာခိုင်နှုန်းပေါ်တွင်လေး CAEP အုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အဆိုပါ CAEP အဖွဲ့များ EP-ခင်မှာ variable ကို (χအပေါ်သိသိသာသာကွဲပြား2 = 40.14, df 3, P <.001) ။ No-CAEP၊ CAEP-Application အတွက်သာ၊ CAEP-PVI နှင့် CAEP-နှစ်မျိုးလုံးအုပ်စုများတွင်ထိုးဖောက်ခြင်းမတိုင်မီအနည်းဆုံး EP ရံဖန်ရံခါအစီရင်ခံသောအမျိုးသားရာခိုင်နှုန်းသည် ၉.၉၊ ၃၅.၇၊ ၂၃.၆ နှင့် ၄၃.၀ အသီးသီးတို့ဖြစ်ကြသည်။ hoc post-hoc ဆန်းစစ်ချက်များတွင် No-CAEP အုပ်စုသည်အခြားအဖွဲ့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကွန်ဒုံးမသုံးပါကထိုးဖောက်ခြင်းမပြုမီ EPs များကိုယောက်ျားများသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ ဇယား 1 Post-hoc နှိုင်းယှဉ်အားလုံး၏ရလဒ်များကိုတင်ပြသွားပါသည်။
ဇယား ၁။ CAEP အုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကွန်ဒုံးများမသုံးသည့်အခါစိုက်ထူခြင်းပြproblemsနာများ၏ကြိမ်နှုန်း
no-CAEP (n = ၂၀142)
သာ CAEP-လျှောက်လွှာ (n = ၂၀42)
သာ CAEP-PVI (n = ၂၀55)
CAEP-နှစ်ဦးစလုံး (n = ၂၀128)
Superscript သုံးပြီး Post-hoc နှိုင်းယှဉ်၏ရလဒ်များကိုညွှန်ပြ P <0.05 စံ။ စာတစ်စောင်မျှဝေသောအုပ်စုများသည်သိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပါ။ စာတစ်စောင်မျှဝေသူများသည်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။
CAEP ကွန်ဒုံး-ဆက်စပ်စိုက်ထူပြဿနာ =; PVI penile-အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု = ။
ဘယ်တော့မှမ (%) 90.1a 64.3b, c 75.4b 57.0 c
ရံဖန်ရံခါ (%) 4.9 28.6 16.4 30.5
လျော့နည်းထက်ဝက်ကျော်အချိန် (%) 3.5 7.1 5.5 8.6
အချိန်ကို (%) အများစုဟာ 1.401.8 3.9
အမြဲတမ်း (%)0000
ဘယ်တော့မှမ (%) 95.1a 85.7b 43.6 c 54.6 c
ရံဖန်ရံခါ (%) 3.5 11.9 40.0 33.1
လျော့နည်းထက်ဝက်ကျော်အချိန် (%) 1.4 2.4 12.7 7.7
အချိန်ကို (%) အများစုဟာ00 1.8 4.6
အမြဲတမ်း (%)00 1.8 0
CAEP အုပ်စုများလည်း EP-PVI (χဘို့သိသိသာသာကွဲပြား2 = 8 3.00, df 3, P <.001) ။ PVI တွင်အနည်းဆုံးရံဖန်ရံခါ EP အစီရင်ခံသည့်ပါ ၀ င်သူ ဦး ရေမှာ ၄.၉၊ ၁၄.၃၊ ၅၆.၄ နှင့် ၄၅.၄ သည် No-CAEP၊ CAEP-Application အတွက်သာ၊ CAEP-PVI တစ်ခုတည်းနှင့် CAEP-Both အုပ်စုများအတွက်ဖြစ်သည်။ Post-hoc ဆန်းစစ်ချက်များတွင် No-CAEP အုပ်စုမှအမျိုးသားများနည်းပါးသည်၊ အခြားအုပ်စုများအားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကွန်ဒုံးကိုမသုံးသောအခါ PVI တွင် EPs ရှိခြင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ CAEP-PVI Only နှင့် CAEP-Both အုပ်စုများသည်ရာခိုင်နှုန်းအမြင့်ဆုံးရှိပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပါ။ PVI အတွင်းအနည်းဆုံးရံဖန်ရံခါ EP ရှိသည့် CAEP လျှောက်ထားမှုအုပ်စုတွင်အမျိုးသားများ၏ရာခိုင်နှုန်းသည်အလယ်အလတ်ရှိပြီးအခြားအုပ်စုများအားလုံးနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။
ဤနမူနာအတွက် IIEF-5 အတွက် Cronbach ၏ alpha သည် ၀.၇၆ ဖြစ်သည်။ စားပွဲတင်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း 2, IIEF-5 ရမှတ် (CAEP အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာကွဲပြားF(3,475) = 15.40, P <.001) ။ အုပ်စုအားလုံး၏ပျမ်းမျှရမှတ်များသည် ၂၁ နှစ်အထက် (non-clinical range) ။ အဆိုပါအဘယ်သူမျှမ-CAEP အုပ်စုတစ်စုကိုသာ CAEP-PVI ကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသော (ပိုကောင်းသော erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုညွှန်း) ကိုအမြင့်ဆုံးရမှတ် (23.92), (22.93) နှင့် CAEP-နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ (22.12), ဒါပေမယ့်မ CAEP-လျှောက်လွှာထဲကနေမှသာ (23.20) ရှိခဲ့ ။ အဆိုပါများအတွက်ယုတ်ရမှတ် CAEP-နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စု CAEP-PVI သာအုပ်စုတစ်စု၏ထံမှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်အခြားအုပ်စုနှစ်စုကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသာ CAEP-လျှောက်လွှာများယုတ်ရမှတ်များနှင့် CAEP-PVI သာအုပ်စုများလည်းသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားကြဘူး။
ဇယား ၂။ CAEP အုပ်စုများမှ IIEF-2 ရမှတ်များနှင့် ED အမျိုးအစားများ
no-CAEP (n = ၂၀184)
သာ CAEP-လျှောက်လွှာ (n = ၂၀66)
သာ CAEP-PVI (n = ၂၀75)
CAEP-နှစ်ဦးစလုံး (n = ၂၀154)
CAEP ကွန်ဒုံး-ဆက်စပ်စိုက်ထူပြဿနာ =; ED erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု =; IIEF-5, Erectile ရာထူးအမည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း; PVI penile-အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု =; SD က = စံသွေဖည်။
mean (SD) IIEF-5 ရမှတ်* 23.92 (2.24)a 23.20 (2.51)တစ်ဦး, ခ 22.93 (2.56)b, c 22.12 (2.54)c
အဘယ်သူမျှမ ED (%) 91.3a 81.8b 77.3b, c 68.2 c
အပျော့စား ED (%) 7.1 15.2 20.0 28.6
ED (%) အလယ်အလတ်မှအပျော့စား 0.5 3.0 1.3 3.2
အလယ်အလတ် ED (%) 1.101.3 0
ပြင်းထန် (%)0000
အဆိုပါ IIEF-5 ရမှတ်များအသုံးပြုခြင်း, ယောက်ျားထို့နောက်ရို et al အားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြသည့်စံနှုန်းများကို အသုံးပြု. အကြီးအကျယ် ED ရန်မ ED ကနေခွဲခြားခဲ့ကြသည်။  (ဇယားကိုကြည့်ပါ 2) ။ ဒါကြောင့်အနည်းငယ်တို့ထကျ သာ. ED အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ပျော့အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည်ဆိုသောကြောင့်, ငါတို့တစ်ခုတည်းအုပ်စုတစ်စုသို့မဆို ED နှင့်အတူယောက်ျားပေါင်းစပ်။ မည်သည့် ED vs. မျှ ED အဖြစ်ခွဲခြားသည့်ရာခိုင်နှုန်းပေါ်တွင်လေး CAEP အုပ်စုများနှိုငျးယှဉျသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ (χရှိခဲ့2 = 28.98, df 3, P <.001) ။ မည်သည့် ED မဆိုသတ်မှတ်ထားသောပါဝင်သူများ၏ရာခိုင်နှုန်းမှာအသီးသီးသည် ၈.၇၊ ၁၈.၂၊ ၂၂.၇ နှင့် ၃၁.၈ - No-CAEP၊ CAEP-Application အတွက်သာ၊ CAEP-PVI နှင့် CAEP-Both များအတွက်ဖြစ်သည်။ ဇယား 2 Superscript Post-hoc ၏ရလဒ်များအဘယ်သူမျှမ-CAEP အုပ်စုတစ်စုကအခြားအုပ်စုများထက်မဆို ED နှင့်အတူသိသိသာသာနည်းပါးလာယောက်ျားပါဝင်သည်ကြောင်းသရုပ်ပြလေ့လာဆန်းစစ်ဖော်ပြသည်။
ငယ်ရွယ်, လိင်ကွဲ, ကွန်ဒုံး-သုံးပြီးယောက်ျား၏ဤနမူနာမှာတော့ CAEPs erectile အခက်အခဲများပိုမိုယေဘုယျအားဖြင့်သေးအများစု subclinical (ပျော့) အဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ (နှင့် / သို့မဟုတ် PVI စဉ်အတွင်းလျှောက်လွှာကာလအတွင်း) CAEP မဆိုပုံစံသတင်းပို့ယောက်ျားကိုလည်းထိုးဖောက်မှုမီနှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးမပြုတဲ့အခါမှာလိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်းစိုက်ထူအခက်အခဲများအစီရင်ခံရန်သိသိသာသာပိုပြီးဖွယ်ရှိအဘယ်သူမျှမ-CAEP အုပ်စုတစ်စုထက်ခဲ့ကြသည်။ သာသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးလျှောက်လွှာစဉ်အတွင်း PVI စဉ်အတွင်း CAEP အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် PVI ယောက်ျားအဘယ်သူမျှမ CAEP သတင်းပို့ထက် IIEF-5 အပေါ်သိသိသာသာနိမ့်သွင်းယူသူကိုယောက်ျား။ CAEP သတင်းပို့အားလုံးအဖွဲ့များအဘယ်သူမျှမ-CAEP အုပ်စုတစ်စုထက် ED အလယ်အလတ်မှအပျော့စားရှိခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားခံရဖို့သိသိသာသာပိုပြီးခဲ့ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ပင် IIEF-5-ဖော်ထုတ် ED ၏အမြင့်ဆုံးနှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်သော CAEP-နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုထဲမှာလူများ၏အများစု (68.2%) ED ရှိခြင်းများအတွက်လက်တွေ့စံတွေ့ဆုံရန်ခဲ့ပါဘူး။
ဤအတွေ့ရှိချက်အဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုအကွာအဝေးရှိပါသည်။ ကွန်ဒုံးသုံးတဲ့အခါ ED နှင့်အတူယောက်ျားလည်း EPS ရှိပါကပထမဦးစွာပြုလုပ်အံ့သြစရာဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ မှန်းဆစဉ်ဒုတိယအနေပါကသူတို့ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါယောက်ျားစိုက်ထူ၏ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံကအရှုံးထက်ပိုသောယေဘုယျအားဖြင့်စိုက်ထူကြုံနေရစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်ဤအရပ်မှပိုပြီး generalized ED ကြုံနေရဖို့ပိုအားနည်းချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ဖြစ်နိုင်သည် ။ ဒါဟာပညာရေးရဲ့ etiology နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အာရုံအဖြစ်သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ၏အရေးပါမှုကိုအကြံပြုသည်အခြားသုတေသနနှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ် .
ADHD ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုအစီရင်ခံတင်ပြသူကိုယောက်ျား CAEP အစီရင်ခံရန်သိသိသာသာပိုပြီးခဲ့ကြသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများ ADHD နှင့်အတူငယ်ရွယ်လူကြီးများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြင့်မားမှုနှုန်းဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ  နှင့် ADHD ဆေးဝါး အသုံးပြု. ယောက်ျားတခါတရံဆေးဝါးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ် erectile ပြဿနာများသတင်းပို့ .
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များ၏ယေဘုယျန့်အသတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ နမူနာငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, လက်ရှိမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စကားသူတစ်ဦးရေရှည်လိင်သီးသန့်ကြားဆက်ဆံရေးအတွက်လိင်ကွဲ, ကွန်ဒုံး-သုံးပြီးလူတို့အားဒီဇိုင်းအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားနှင့်အင်တာနက်ခဲ့ရတယ်။ ထို့ကြောင့်တွေ့ရှိချက်သည်ဤအရည်အချင်းပြည့်မီစံပြင်ပလူတို့ရှေ့၌ယေဘုယျမည်မဟုတ်ပါ။ လိင်သီးသန့်တစ်လဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်ကြာကြာ၌နေသောယောက်ျားဖယ်ထုတ်ပြီးအဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သုတေသနပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူထက်ထူထောင်မိတ်ဖက်နှင့်အတူသော 18-24 တစ်နှစ်အသက်အရွယ်အုပ်စုသည်အစီရင်ခံစာထဲတွင်ယောက်ျားအများကြီးနိမ့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်ခဲ့ ။ အဆိုပါ 18-24 အသက်အရွယ်အုပ်စုတွင်အမျိုးသားများလည်းကာလသားများနှင့် HIV ပိုးကူးစက်ခြင်းမြင့်မားအန္တရာယ်မှာ , ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုမြင့်မားမှုနှုန်းနေသော်လည်း .
ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းသည်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုစံနှုန်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပြီးယခင်ကကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသော်လည်း CAEP သို့မဟုတ်အခြားပြproblemsနာများကြောင့်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြသောအမျိုးသားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာတွင်မဖော်ပြထားပါ။ နောက်ထပ်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည် erectile ပြtoolနာများ၏ပြင်းထန်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ခိုင်လုံသောအထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီ၏ပြdistနာနှင့်ပတ်သက်သောဆင်းရဲဒုက္ခများကိုကျွန်ုပ်တို့မတွက်ဆခဲ့ပါ။ အထီး erectile ရောဂါ၏ရောဂါအတွက်စံများအတွက်ရောဂါလက္ခဏာတွေနှင့်ပတ်သက်။ ဆေးခန်းသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်လိုအပ်သည် ။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် erectile ရောဂါပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုအစီရင်ခံရန်, သို့သော်, မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ကွန်ဒုံးအသုံးမပြုတဲ့အခါမှာ CAEP သတင်းပို့သူကိုယောက်ျားလည်းကြုံနေရ EPS သတင်းပို့ခြင်းရှိမရှိနှင့် IIEF ရမှတ် CAEP သတင်းပို့မဟုတ်လူတို့သညျကှာခွားရှိမရှိတည်ထောင်ရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်သောငါတို့နမူနာအတွက် CAEP သတင်းပို့တို့, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 18-32% (PVI စဉ်အတွင်း, ဒါမှမဟုတ်လျှောက်လွှာများနှင့် PVI နှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်း, သူတို့ကသာကွန်ဒုံး၏လျှောက်လွှာစဉ်အတွင်း CAEP အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်) ED အလယ်အလတ်မှအပျော့စားဘို့ IIEF စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအကြံပြုပါသည်။ ဤအပါဝင်သူအများစုက "ပျော့" ED ကဏ္ဍခွဲခြားခဲ့သည်ဖြစ်သော်လည်းဤတွေ့ရှိချက်များ၏မည်သို့ပင်ဆိုစေရှင်းရှင်းလင်းလင်းလက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ EPS လျော့နည်းတသမတ်တည်းနှင့်မပြည့်စုံကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ,  အပြန်အလှန်အားဖြင့် STI / HIV ကူးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ယောက်ျား၏ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ ဤအုပ်စုသည်၎င်းတို့၏ erectile အခက်အခဲများကိုလျှော့ချရန်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတိုတောင်းသောကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုအချို့မှအကျိုးရရှိနိုင်သည်။ ED အတွက်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာကုသမှုများသည်များသောအားဖြင့် Erectile အခက်အခဲရှိသောအမျိုးသားများအတွက်“ ပထမအဆင့်” နည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်းယခင်လေ့လာမှုများအရ PDE-5i သည် CAEP ကိုမကျော်လွှားနိုင်ပါ ။ ထို့အပွငျ PDE-5i အသုံးပြုမှုကိုကွန်ဒုံးကျိုးများအတွက်အန္တရာယ်အချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .
CAEP နှင့်အတူယောက်ျားယောက်ျား CAEP, Janssen နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအစီရင်ခံမထက်နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာဖို့အချိန်ပိုမိုလိုအပ်စေခြင်းငှါတွေ့ရှိချက်များအမြင်တွင်  အထူးသဖြင့်ကွန်ဒုံးကိုသုံးသောအခါစိတ်ဖိစီးမှုမြန်စေရန်နှင့် CAEP ရှိအမျိုးသားများအားလုံလောက်သောအချိန်ပေးရန်အားပေးသင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ လူငယ်များအကြားတွင်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန်မှုဖြင့်အိမ်တွင်း ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုလေ့လာမှုများ (အနည်းဆုံးဆရာ ၀ န်သာလိုအပ်သည်) သည်အမျိုးသားများ၏ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းစွမ်းရည်၊ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုရန်မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုနှင့်ကွန်ဒုံးသက်တောင့်သက်သာရှိမှုအပေါ် ပိုမို၍ ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်။ ကျိုးနှင့် EPs Post- ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအတွက်လျှော့ချရေး [28,29]။ မှန်ကန်သောကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုလိုအပ်ကြောင်းလည်းရှိပါသည်။ ကွန်ဒုံး-သုံးပြီးယောက်ျား၏လက်ရှိနမူနာထက်ပိုသုံးပုံတစ်ပုံ (37%) ကိုမှန်ကန်စွာကွန်ဒုံးသုံးစွဲဖို့နည်းကိုသင်ကြားဖူးလေသည်။ Clinician, ယောက်ျားကွန်ဒုံးအတွေ့အကြုံကို CAEP သုံးပြီးရှိမရှိနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်သင့်လျော်သောအကဲဖြတ်ရန် psychosexual ကုထုံးများအတွက်ရည်ညွှန်းအောင်သို့မဟုတ်ကွန်ဒုံးကျွမ်းကျင်မှုပညာရေးပေးသင့်ပါတယ် [28,29].
အဆိုပါတွေ့ရှိချက် CAEP သတင်းပို့သူကိုယောက်ျားကိုလည်းပိုပြီး generalized စိုက်ထူအခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ယင်း EPS ED များအတွက်လက်တွေ့စံတွေ့ဆုံရန်မဟုတ်နိုင်ပေမဲ့, Clinician ယောက်ျားကွန်ဒုံးအတွေ့အကြုံကို CAEP သုံးပြီးရှိမရှိအကဲဖြတ်ဘယ်မှာသင့်လျော်သောသငျ့သညျ, psychosexual ကုထုံးအဘို့ကိုရည်ညွှန်းသို့မဟုတ်ကွန်ဒုံးကျွမ်းကျင်မှုပညာရေးကိုပေး။
အကျိုးစီးပွား၏ပဋိပက္ခ: စာရေးသူ (s) ကိုအတိုးမရှိပဋိပက္ခများကိုသတင်းပို့ပါ။
(က) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းStephanie Sanders; အဲ Janssen; Brandon ဟေးလ်
(ခ) ဒေတာများ၏သိမ်းယူမှုStephanie Sanders; အဲ Janssen; Brandon ဟေးလ်
(ဂ) ဒေတာများလေ့လာခြင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်Stephanie Sanders; အဲ Janssen
(က) အဆိုပါအပိုဒ်ရေးဆွဲရေးStephanie Sanders; စင်သီယာဂရေဟမ်; ဘီလ် Yarber; Rick Crosby သည်, ရော်ဘင် Milhausen
(ခ) Intellectual အကြောင်းအရာကထပ်မံစိစစ်တည်းဖြတ်Stephanie Sanders; စင်သီယာဂရေဟမ်; ဘီလ် Yarber; Rick Crosby သည်, ရော်ဘင် Milhausen; အဲ Janssen; Brandon ဟေးလ်
(က) အဆိုပါ Completed အပိုဒ်၏နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်Stephanie Sanders; စင်သီယာဂရေဟမ်; ဘီလ် Yarber; Rick Crosby သည်, ရော်ဘင် Milhausen; အဲ Janssen; Brandon ဟေးလ်
1 Mitchell က KR, မာ CH, Ploubidis GB ကို, ဂျုံးစ်ကီလိုဂရမ်, Datta J ကို, ဖျော်ဖြေမှုဂျေ, Copas AJ, Tanton ကို C, Erens B, Sonnenberg P ကို, Clifton S က, Macdowall W က, Phelps တစ်ဦးက, ဂျွန်ဆင်လေး, ဗြိတိန်အတွက်ကောင်းစွာ K. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို : လိင်သဘောထားနှင့်လူနေမှုပုံစံ၏တတိယအမျိုးသားစစ်တမ်း (Natsal-3) မှတွေ့ရှိချက်များ။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 2013; 382: 1817-1829 ။
Prins J ကို, Blanker MH, Bohnen လေး, သောမတ်စ်က S, Bosch ရဲ့ JL ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့: လူဦးရေ-based လေ့လာမှုတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ int J ကိုသင်ျခြို Res 2002; 14: 422-432 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 112
Segraves RT ကို။ 2010-7: 654; DSM V. J ကိုလိင် Med 671 အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။
PDF ဖိုင် (147K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 12
Lewis က RW ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကူးစက်ရောဂါ။ Urol Clin မြောက်အမေရိက Am 2001; 28: 209-216 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 44
Jannini EA ၏, Sternbach N ကို, Limoncin အီး, Ciocca, G, Gravina GL, Tripodi က F, Simonelli C. ကျန်းမာရေး-related ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျား၏လို့ဆိုချင်ပါတယ်လိုအပ်ချက်များကို: ငါးဥရောပနိုင်ငံများရှိတစ်ဦးကစစ်တမ်းကောက်။ J ကိုလိင် Med 2014; 11: 40-50 ။
PDF ဖိုင် (269K)
Laumann EO, ပိုက်တစ်ဦး, ရို RC ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ဂျေအေအမ်အေ 1999; 281: 537-544 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 2187
Mialon တစ်ဦးက, Berchtold တစ်ဦးက, Michaud PA ဆိုပြီး, Gmel, G, Suris JC ။ ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ: လူပျိုတို့အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး 2012; 51: 25-31 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 14
Korkes က F, ကော်စတာ-Mato တစ်ဦးက, Gasperini R ကို, Reginato PV, ဖာရ MD ။ ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတဲ့လူ PDE5 inhibitors ၏အပန်းဖြေအသုံးပြုမှု: ဆေးပညာဆိုင်ရာကျောင်းသားများအကြားဤပြဿနာကိုအသိအမှတ်ပြု။ J ကိုလိင် Med 2008; 5: 2414-2418 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 18
ဂရေဟမ်, CA, Crosby သည် R ကို, Yarber WL, Sanders လုပ် SA, McBride K ကို Milhausen RR, ARNO ဖြစ်မှု။ အန္တရာယ်အပြုအမူများအတွက်အလားအလာဆက်စပ်မှုနှင့်သက်ရောက်မှုတွေ: တစ်အများပြည်သူကာလသားဆေးခန်းတက်ရောက်ခြင်းငယ်ရွယ်လူတို့တွင်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်စိုက်ထူအရှုံး။ လိင်ကျန်းမာရေး 2006; 3: 255-260 ။
Sanders လုပ် SA, Yarber WL, Kaufman EL, Crosby သည် RA, ဂရေဟမ်, CA, Milhausen RR ။ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအမှားအယွင်းများနှင့်ပြဿနာများကို: တစ်ဦးကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြင်။ လိင်ကျန်းမာရေး 2012; 9: 81-95 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 34
Janssen အီး, Sanders လုပ် SA, ဟေးလ် BJ, Amick အီး, Oversen: D, Oversen: D, Kvam P ကို, ကွန်ဒုံး-ဆက်စပ်စိုက်ထူပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားသူကိုနုပျို, လိင်ကွဲယောက်ျား (CAEP) တွင်လိင်စိတ်နိုးထ၏ Ingelhart K. ပုံစံများ။ J ကိုလိင် Med 2014; 11: 2285-2291 ။
PDF ဖိုင် (188K)
Yarber WL, ဂရေဟမ်, CA, Sanders လုပ် SA, Crosby သည် RA ။ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြိုအကြားကွန်ဒုံးကျိုးနှင့် slippage ၏ဆက်စပ်မှု။ int J ကို STD အေအိုင်ဒီအက်စ် 2004; 15: 467-472 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 31
Hensel DJ သမား, Stupiansky ဘ, Herbenick: D, Dodge B, Reece အမ်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုမရဖြစ်တဲ့အခါ: အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်းကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအပြုအမူတွေ၏အဖြစ်အပျက်-Level ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကိုလိင် Med 2011; 8: 28-34 ။
PDF ဖိုင် (89K)
Bancroft J ကို, Janssen E ကို, ခိုင်ခံ့: D, Carnes L ကို, Vukadinovic Z ကို, Long က JS ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ယူပြီးလိင်တူချင်းအမျိုးသားများတွင်: အဆိုပါလိင်စိတ်နိုးထ၏ဆက်စပ်မှု, ခံစားချက်နှင့်အာရုံခံစားမှုရှာ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2003; 32: 555-572 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 80
Richters J, Hendry O, Kippax S. လုံခြုံစိတ်ချရသောလိင်မဖြစ်သည့်အခါ။ ယဉ်ကျေးမှုကျန်းမာရေးလိင် 2003; 5: 37-52 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 29
Fortenberry JD, Tu W က, Harezlak J ကို, Katz ကို BP, Orr DP ။ အသစ်ထူထောင်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု function ကိုအဖြစ်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း။ နံနက် J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 2002; 92: 211-213 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 120
ရို RC, Cappelleri JC, Smith က MD, Lipsky J ကို, Pena BM ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အဖြေရှာတဲ့ tool အဖြစ် Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း (IIEF-5) ၏တစ်ဦး abridged, 5-item ကိုဗားရှင်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အကဲဖြတ်။ int J ကိုသင်ျခြို Res 1999; 11: 319-326 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 983
Sanders လုပ် SA, ဟေးလ် BJ, Crosby သည် RA, ငယ်ရွယ်, လိင်ကွဲယောက်ျားအတွက်ကွန်ဒုံး-ဆက်စပ်စိုက်ထူပြဿနာများ၏ Janssen အီးဆက်စပ်မှု: ကွန်ဒုံးမထိုက်မတန်, Self-ထိရောက်မှု, သဘောထားအမြင်များနှင့်တွန်းအား။ AIDS ရောဂါပြုမူနေ 2014; 18: 128-134 ။
Nobre PJ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း Pinto-Gouveia ဂျေစိတျလှုပျရှားမှု: လိင်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်အလုပ်မဖြစ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားကွာခြားချက်များ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2006; 35: 491-499 ။
Flory K ကို Molina BS, Pelham Jr WE, Gnagy အီး, Smith ကခကလေးဘဝ ADHD ငယ်ရွယ်လူကြီးအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခန့်မှန်းထားပါတယ်။ J ကို Clin ကလေးမြီးကောင်ပေါက် Psychol 2006; 35: 571-577 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 65
DeSantis အေဒီ, ဝက်ဘ်က EM, Noar သည် SM ။ တစ်ဦးက multimethodological ချဉ်းကပ်: တစ်ကောလိပ်တက္ကသိုလ်နယ်မြေပေါ်တွင်ဆေးညွှန်း ADHD ဆေး၏တရားမဝင်အသုံးပြုခြင်း။ J ကို Am Coll ကျန်းမာရေး 2008; 57: 315-324 ။
Fortenberry JD, Tu W က, Jaroslaw Harezlak J ကို, Katz ကို BP, Orr DP ။ အသစ်ထူထောင်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု function ကိုအဖြစ်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း။ နံနက် J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 2002; 92: 211-213 ။
Satterwhite CL, Torrone အီး, Meites အီး, Dunn EF, Mahajan R ကို, Ocfemia MC, စု J ကို, Xu က F, Weinstock အိပ်ချ်ကိုအမေရိကန်အမျိုးသမီးများနှင့်လူတို့တွင်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု: ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ဖြစ်ပွားမှုခန့်မှန်းချက်, 2008 ။ လိင် Transm dis 2013; 40: 187-193 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 101
Reece M က, Herbenick: D, Schick V ကို, Sanders လုပ် SA, Dodge B, Fortenberry JD ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ 14 မှယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအသက်အရွယ် 94 တစ်အမျိုးသားရေးဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာများတွင်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုနှုန်းထားများ။ J ကိုလိင် Med 2010; 7: 266-276 ။
PDF ဖိုင် (114K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 67
American Psychiatric Association ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းကို manual ။ 5th ထုတ်ဝေ။ Arlington, VA သို့: အာဘော်; 2013 ။
Sanders လုပ် SA, Milhausen RR, Crosby သည် RA, ဂရေဟမ်, CA, Yarber WL ။ phosphodiesterase type ကို5inhibitors ကွန်ဒုံး-ဆက်စပ်စိုက်ထူအရှုံးနှင့်ကွန်ဒုံး slippage ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပါနဲ့? J ကိုလိင် Med 2009; 6: 1451-1456 ။
PDF ဖိုင် (90K)
Crosby သည် R ကို, Yarber WL, Milhausen R ကို, Sanders လုပ် SA, ဂရေဟမ် CA. ကွန်ဒုံးကျိုးနှင့်ဆက်စပ် PDE-5i အသုံးပြုမှုကိုလား? လိင် Transm Infect 2009; 85: 404-405 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 7
Emetu RE, မာရှယ်တစ်ဦးက, Sanders လုပ် SA, Yarber WL, Milhausen RR, Crosby သည် RA, ဂရေဟမ် CA. လိင်တူဆက်ဆံသူကိုလူပျိုတို့အကြားကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုတိုးတက်စေရန်တစ်ဦးကဝတ္ထု, Self-guided အိမ်-based ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။ J ကို Am Coll ကျန်းမာရေး 2013; 62: 118-124 ။
Milhausen RR, Sanders လုပ် SA, Crosby သည် RA, Yarber WL, ဂရေဟမ်, CA, Wood ကဂျေတစ်ဦးကဝတ္ထု, Self-guided လူပျိုတို့အကြားကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်အိမ်မှာ-based ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု: တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးလေ့လာမှု။ J ကို Mens ကျန်းမာရေး 2011; 8: 274-281 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 6